Bhutan : Noraràn’ny Manampahefana ny Horonantsary Iray Noho ny ‘Fampiasàna Fahatany’ Ireo Sarontava Fampiasa amin’ny Fivavahana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Febroary 2017 7:28 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Ελληνικά, Français, English
Nambaran'ny Manampahefan'ny Media sy ny InfoComm ao Bhutan (BICMA) fa tsy mahazo alefa amin'ny fahitalavitra ao amin'ny firenena ilay Hema Hema: Sing Me a Song While I Wait (Mihirà Hira iray Ho Ahy Raha izaho ilay Mbola Miandry iny), horonantsary lava an'ilay Tibetana Bodista lama sady mpanoratra, Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche, taorian'ny nijeren'ny Vaomieram-pirenena Mpijery Ireo Horonantsary sy ny Departemantan'ny Kolontsaina sy ireo Raharaha Koltoraly ao amin'ny Ministeran'ny Atitany.
Ao Bhutan no mitranga ny tantara ao amin'ilay horonantsary, ary miresaka vondron'olona mifamory mandritry ny andro maro any anaty ala, tsy mifankahafantatra anarana noho ireo sarontava anaovany. Novokarina tany Bhutan niaraka tamin'ireo mpilalao maherin'ny 400 isa izy io, mponina am-bohitra avy any amin'ny faritra atsinanana ao amin'ny firenena ny ankamaoany.
Bodisma no fivavahana ofisialin'i Bhutan, ary manana ny heriny amin'ireo sokajy maron'ny kolontsainan'ilay firenena kely io. Manana dikany ireo savontava amin'ireo fombafomba sasany. Amin'izao, miasa mafy i Bhutan mba hitahirizana ireo kolontsainy nentimpaharazana sy ny lovany, ao anatin'ny rivotra mitsokan'ireo kolontsaina avy any ivelany, satria miatrika fivoarana haingana dia haingana ny firenena ankehitriny.
Maro anefa ireo Bhutane no tsy mahazo hoe inona no tena olana tsy anekena ireo sarontava. Efa nalefa tamin'ireo fetiben'ny horonantsary iraisampirenena maro ilay horonantsary, toy ny tamin'ny Fetiben'ny Horonantsary Locarno, Fetiben'ny Horonantsary BFI London, Fetiben'ny Horonantsary Taipei Golden Horse ary ny Fetiben'ny Horonantsary Iraisampirenena ao Singapour, ary nahazo fankasitrahana manokana avy tamin'ny mpitsara iraisampirenena ka nahazoany ny laharana faharoa tamn'ny Fetiben'ny Horonantsary Iraisampirenenan'i Toronto ny volana Septambra tamin'ny taona lasa. Nomanina havoaka voalohany tany Bhutan ny volana Desambra 2016 izy io.
Ho an'ny KANTO & FAMORONANA Bhutane #afahohemahema… Ry mpandrindra, aza afangaro azafady ny fitiavana ny kolontsaina sy ny fahalalahana mamorona.
Niresaka ilay fandraràna ny pejy Facebook ofisialin'ilay horonantsary:
Manontany tena ny olona hoe tena nanitsakitsaka marina tokoa ny kolontsaina na ireo eva ara-pivavahana ve ilay horonantsary, araka ny niampangàna azy, raha toa izay ireny nampiasaina tsotra ho an'ny resaka kanto fotsiny. Ohatra, naneho hevitra toy izao i Tashi TD:
Nilaza izao i Younten Jamtsho:
Nijery ilay horonantsary sy ny fampiasàna ireo sarontava i Sonam Wangmo Dukpa-Jhalani ho an'ny gazetiboky Bhutane Yeewong mampiseho fomba fiaina :
Ary ireo sasany toa an'i Sonam Wongmo manontany tena hoe sao politika koltoraly ary io: